I-Concept UFO evela kuDell, imbangi ethe ngqo ethe ngqo yeNintendo Shintsha | Iindaba zeGajethi
UDell uveza i-Concept UFO, "inguqulelo" yayo yeNintendo switch
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiconsoles, I zi ganeko, Izaziso, Videogames
Yile nto siyijongileyo kwiminyhadala yamanye amazwe, izixhobo ezitsha kunye nezixhobo eziza kongeza kwikhathalogu ekhoyo kwintengiso. Kule meko, evela kumenzi owaziwayo weekhompyuter zecandelo uDell sikwazile ukufunda malunga nengcinga yesixhobo esiqheleke kakhulu kuthi, i-Concept UFO.
Nangona kuqala kuphela ngumzekeloYonke into ibonisa ukuba ikwisigaba sophuhliso. Kwaye kunokwenzeka ngakumbi ukuba nge-2.020 iyakufikelela kuzo zonke iivenkile. Ikhonsoli enomboniso Nintendo ethe yathimba izangqa ezahlukileyo "zabadlala umdlalo" kufutshane kakhulu nokuba nembangi ngqo kwimarike.
I-Concept UFO, imbangi ethe ngqo yoTshintsho
Njengoko sibona kwimifanekiso i-Concept UFO inokubizwa Ukutshintsha kweNell kaDell. Ifomathiweyo ilandelwa, kunye noluntu ekujongwe kulo, ngokufanayo. Idatha encinci ayikaveli malunga nento uDell azimisele ukufaka isandla kuyo kweli candelo. Umbuzo ke ngowokuba uya kuba nakho ukumelana nehlabathi elinamandla onke.
Okwangoku siyazi ukuba ikhonsoli iya kuba nayo Iscreen se-8 intshi enesisombululo se-1200p. Kwaye ulawulo kwicalanazo ezo isuswe, Sebenza ngokwahlukeneyo njengolawulo olusisiseko, okanye kunye kulawulo olupheleleyo. Ngokuphathelene ne-chip onokuyinyusa, siyazi kuphela ukuba iya kuba I-XNUMXth yeGen Intel.
Ngaba kunokwenzeka ukubala onke amandla e-Alienware pc kwisixhobo esincinci esiphathwayo? Ukuba le projekthi yoqhankqalazo iyenziwa kwaye i-Concept UFO iba yinto yokwenyani, siya kuba nakho ukubala Encinci Windows 10, kodwa unamandla okuba Iyakwazi ukuqhuba eyona midlalo inzima.
Ukuba sijonga unxibelelwano ikwabonelela ngamathuba amaninzi. Njengoko kulindelwe, i-Concept UFO iya kubakho Unxibelelwano lweBluetooth, iWifi Nokuba une Izibuko leNdudumo. Iya kuba nayo Izibuko le-USB apho sinokuqhagamshela khona imouse okanye iibhodi yezitshixo ukuzisebenzisa njengePC eqhelekileyo. Ngaba sijongene ikhompyuter encinci yabadlala umdlalo? INintendo Ukutshintsha kweVitamin? Ngaba uyabona ukuba olu hlobo lwesixhobo lunokuba nesikhewu kwintengiso?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UDell uveza i-Concept UFO, "inguqulelo" yayo yeNintendo switch
Yintoni omele uyibukele kwiNetflix nakwiHBO kaJanuwari 2020